Home » Creative Writing » ဖွဲတစ်ဆုပ်…
အဘိုးကြီး နေ့လည်ခင်း တရေးအိပ်နေတုန်း မဝင်းကို အတင်းပြန်ပို့တာခင်ဗျ ။ ဘိုးတော် အိပ်ရာကနိုးလာတော့ “အဝင်းရေ… အဝင်း” ဆိုပြီး အော်နေလို့ “မဝင်း လင်နောက်လိုက်သွားပြီ” ဆိုပြီး ပါတောပိတ်လိုက်တာ မရဘူး ။ “မောင်ဋ္ဌေး… မင်းလက်ချက် ငါသိတယ် ၊ အခုပြန်ခေါ်ပေး ” ဆိုပြီး ငိုလိုက်တာ ၊ ဖျားတောင်ယူတယ် ။ ဒီပုံဆို ဘိုးတော် အသက်တိုတော့မှာပဲဆိုပြီး မဝင်းကိုပြန်ခေါ် ၊ အမွေပုံပစ္စည်းတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင် တောင်းခွင့်မရှိကြောင်း ရှေ့နေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ပြီး ” အဝင်းကလေးကို ဘိုးတော်လက် ပြန်အပ်လိုက်ရပါကြောင်း ” ။ ဘိုးတော်ဆုံးတော့ အဝင်းလည်း ဟိုခေတ်က ၅-သိန်းလောက် ခိုင်သွားသတဲ့…
ဦး ကျောက်ခဲ has written 54 post in this Website..
* * နာမည်​​လေး​တွေ​ပြောင်းထားပြီးဖြစ်​လို့
ကြိုက်သလိုသာရှယ်ပါဗျား… သဘောရှိ ကလောဟိ…
** နာမည်ပြောင်းရင် ကင်ပွန်းတပ်ပွဲလေးတော့လုပ်…
ကျောက်စ်ရဲ့ ကော်ဖီသောက်ရင်းလွမ်းတဲ့ ငယ်ဘ၀အကြောင်းကို
ဒီမှာက အဖော်အပေါင်းလည်းမရှိ ၊ ပျင်းရင် ကော်ဖီနဲ့ အလွမ်းဖြေရတာ…
ဘိုးဒေါ်ဆီက ဆေးနည်းလေးဘာလေး မတောင်းထားလိုက်ဘူးလားငင်
ဘယ်လိုဂွင်ဆင်ပြီး ဘယ်လိုချုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိတယ်ဗျ…
ဟယ် . . . ဖွဲတစ်ဆုပ် အစွမ်း အံ့မခန်း ဟုတ်သေးပါဘူးလေ . . .
တကယ်တော့ ဘိုးတော်က သာယာတာပဲ ရှိပါသတဲ့…
သူ့သား ဆရာဋ္ဌေးပြောတာ… အာ ဟိ
အနိစ္စဆိုတာ အနိပ်ကလေးတွေက စတာတဲ့…
အသက်ကြီးပြီး ခေါင်းတုန်တဲ့လူတွေကို မြင်ဖူးမှာပေါ့…
အဖိုးအိုတွေကတော့ “အပေါ် အောက်မို့ ခေါင်းငြိမ့်သလိုပဲတဲ့”
အော် ခေါင်းငြိမ့်သလိုတဲ့လား ….. :P
ပေါင်ကျိုးသလောက် ရှိတယ်ဆိုလား ဘာလား ….
ဒီခေတ်ကတော့ ပေါင်ကျိုးရင် နွားသတ်ရုံရောက်မယ် ကိုရင်မှော်ရေ…
ဘဘကြီးခေါ်ပြီး ခေါင်းနဲ့ခွေ့ရင် နံကျိုးကိန်းလည်းရှိတယ်…
ဝါဂွမ်း တစ်ဆုတ် နဲ့ ဖွဲ တစ်ဆုတ် ဘယ်ဟာ ပိုလေးတုန်းးး
ဝါဂွမ်းတော့ မီလုပ်ပါနဲ့ ဖွဲလောက်တော့ လုပ်လိုက်ပါ…
အဆိုတော် မမဂျီးတော့ ဖွင့်မီပြောရဲဘူး ၊ ရှော့စိလယ်… ခွိ
ဂျပန်လူမျိုးယောက်ျးတွေရဲ့.. အသက်ကြီးလာလို့.. သေရတော့မယ်ဆို.. အသေချင်ဆုံးပုံစံလေးက… ဆက်ဆံနေရင်းတန်းလန်းတဲ့..။
ခလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ ဂစ်ကနဲ အသက်ထွက်ရင်တော့ ကောင်းပါရဲ့….
နောက်ဘွမှာ မဟာသမုဒ္ဒယာထဲ ကူးခတ်ဖို့ဇောကပ်နေပါဦးမယ်…
ဖွဲတစ်ဆုပ်ဆိုကတည်းက ထင်သား ဟိဟိ။
ဦးလေးတို့ အသက်အရွယ်…ဦးလေးတို့ အတွေ့အကြုံ စုံခဲ့တာတွေကို … ဦးလေးတို့ ပြန် ပြောပြတာ ဖတ်ရတာကို သဘောကျမိတယ်။
Life means “Live and Learn” လေ ကိုရင်ရဲ့…
တော်သေးတာပေါ့ နောက်တယောက်မရှာခိုင်းဘဲ အဝင်းပြန်ခေါ်ပေးတာနဲ့တင်အိုကေလို့ :P
ဝုတ်ပါ့ … အော့ကြောလန် အဲသည့်ဘိုးတော်ကို အဝင်းပဲ သည်းခံနိုင်တာ …
အခုခေတ်မှ မီဟုတ်… အရင်ခေတ်ကတည်းက ရှိတာကိုရင်ဆောရိုးရဲ့…
အာ ဟွိ … ဘာတွေမန့်မိတယ်မသိ…
ဒီလို အတ္တ/ပရ မျှတ၀န်ဆောင်မှုမျိုးဆို ဈေးနှုန်းလေး ဘယ်လောက်ရှိလဲဗျ
..ဆယ့်ငါးသိန်းကနေ သိန်းငါးဆယ်အထိ အစားစားရှိကြောင်းပါ … လိုချင်တဲ့ Specification အတိအကျပါ ရနိုင်သေးသဗျ… CV ဖောင်လိုက်..ရနိုင်ကြောင်း..ပြည်တွင်းသာမက.ဒေသတွင်းတင်မက …ဆိုဗီယက်ခွဲထွက်နိုင်ငံတွေကပါ အလုပ်အကိုင်ဗီဇာနဲ့ခေါ်လာလို့..ရနိုင်ကြောင်း…ဘာတွေဖြေမိမှန်းမသိ….စိတ်ထဲ…ရှိသင့်တာ…ရှိချင်တာလျှောက်ပြောတာနော်..ယုံရင်ကိုယ့်အမှုနဲ့ကိုယ်..အဟိဟိ
မှတ်ထားမှ.. အဲ.. အဲ.. မှတ်သားစရာ..။
သဂျီး ဆိတ်ဝင်စားရင် ကိုရင်ဆောရိုးနဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ…
အဲ… ကိုယ့်အမှုတော့ ကိုယ်ရှင်း ၊ သဂျီးဂဒေါ်ကွိုင်ရှာရင် ကျော်တို့မပါ…
..သူဂျီး ပိုကျွမ်းကျင်ပုံပဲ …တခါသား ..အမေရိက ကောလိပ် ကကောင်မလေးတွေနဲ့​ Sugar dady တွေအကြောင်း သူမန့်ဖူးသလားမှတ်တယ်…အဟိဟိဟိ
အဟိ ထင်တော့ထင်သား . . . အဘိုးကြီးနဲ့ ဘာညာတော့မယ်လို့ . . .
အဘိုးကြီးက ဝါရင့် သဘာရင့် … အကွက်စေ့တယ်…
မဟာရာဇာ အံစာတုံး on မောင်ရိုး ဟုခေါ်သည် (သို့) surmi နောက်ကြောင်းပြန်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး on ကွီးယားစစ်ပွဲ (၁၉၅၀-၁၉၅၃)
ဦး လေး မန်း on မေ့မရပြီ စိတ်မှာစွဲ …
ဦး လေး မန်း on မောင်ရိုး ဟုခေါ်သည် (သို့) surmi နောက်ကြောင်းပြန်
ဦး လေး မန်း on ရခိုင်အရေး တထိုင်တွေး
ဦး လေး မန်း on တူရကီတို့ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခဲ့သော အာမေးနီးယန်း တသန်းခွဲ (၁၉၁၅ – ၁၉၁၈)
သင့်အေးရိပ် on ယိုင်နဲ့ခြင်းမှသည် ခိုင်ခံ့ခြင်းဆီသို့. . .
မဟာရာဇာ အံစာတုံး on မေ့မရပြီ စိတ်မှာစွဲ …
kai on သဘောကျမိတဲ့ အပြောကလေး
ဦးကျောက်ခဲ on သဘောကျမိတဲ့ အပြောကလေး
Shar Thet Man on ယိုင်နဲ့ခြင်းမှသည် ခိုင်ခံ့ခြင်းဆီသို့. . .
Shar Thet Man on ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက် အခွင့်အလမ်း
Shar Thet Man on သက်ငယ်
Shar Thet Man on မတူကွဲပြားပေမယ့် အလှတရားကိုယ်စီရှိကြသည်
Anzartone (95592 Kyats )